Siyaabaha 5 Expo2020 waxay kor u qaadi doontaa Dhaqaalaha Dubai | Shaqooyinka - Shaqada - Dhaqaalaha Safarka
5 hababka Expo2020 waxay kor u qaadi doontaa dhaqaalaha Dubai
Isku-dubarid Blog ku yaal Dubai
Laga soo bilaabo Oktoobar 20, 2020, ilaa Abriil April 10, 2021, UAE waxay farxad gelin doontaa adduunka si ay ugu dabaaldegto dhaqanka, iskaashiga iyo cusboonaysiinta 2020 World Expo Fair.
Waa markii ugu horeysay ee World Expo lagu qabi doono gobolka Carabta, iyada oo ay ku taallo goobta Expo 2020 ee Dubai. Ilaa iyo hadda, tirada guud ee wadamada 190 ayaa xaqiijiyay in kaqeybgalka dhacdooyinka soo bandhigay malaayiin dad ah oo ku soo galay gudaha UAE. Mawduuca loo doortay ee Expo 2020 waa "Isku xirida Minds, Abuurista Mustaqbalka", oo leh mawduucyada hoos-u-waaridnimada, Mobility-ga iyo Opportunity.
Safarka Xogta 2020 wuxuu noqday mid rasmi ah oo 27 ahth November 2013, markii ay Dubai ku guulaysatay xuquuqda ah inay marti galiso farxad, jubilations iyo rashka. Fasax Qaran ayaa lagu dhawaaqay dhammaanba hay'adaha waxbarashada ee dalka oo dhan maalinta xigta. Tani waxay ku tusineysaa sida ay muhiimka u tahay xayasiinta iyo dhacdooyinka dambe ee macnaheedu ma aha oo kaliya Dubai, laakiin dhammaan UAE iyo gobolka Bariga Dhexe. Waxay ujeedadeedu tahay in ay ka tagto dhaxal macno leh oo joogto ah oo mustaqbalka sii wadi doona jiilka markii shirkada Expo ay si rasmi ah u dhammaato.
Dalalka soo socda ayaa ku dhawaaqay inay ka qaybgalayaan Expo 2020:
Ololayaasha suuqgeynta iyo isgaadhsiinta waa kuwo socda oo si wax ku ool ah loo hirgeliyo dhowr meelood oo kala duwan. Waxaa jirey dhowr arrimood oo ka mid ah shirkadda Expo oo ay ka heleen fanaaniin iyo shirkadaha caalamiga ah iyo shirkadaha ayaa horey u soo bandhigay jimicsiga sawiradooda cusub iyo kuwa mustaqbalka.
Marka laga reebo dhamaan suuqyada iyo boganka sida Expo 2020 saameyn ugu yeelanayso dhaqaalaha, iyo faa'iidada ay u keeni doonto Dubai guud ahaan?
Kanaalka rasmiga ah ee YouTube ee Dubai Expo 2020
5 hababka Expo2020 ayaa kor u qaadi doona dhaqaalaha Dubai - Booqo Expo 2020 YouTube Channel
Kartida wadan ee abuurista shaqooyinka waa tilmaamo ah in qaybaha dhaqaalahooda ay u socdaan oo shaqeynayaan. Marka fursado shaqo loo abuuro, waxaa jira sicir kororka sirta oo kor u kacay. Ganacsiyada soo koraya oo guud ahaan ku hadla, dadku waxay ku raaxeysan karaan nolol maalmeedka dhaqaalaha dhaqaale ee joogtada ah. Ka dib markii Dubai lagu dhawaaqay inay martigelisay World Expo 2020, waxaa lagu qiyaasay in ka badan 277, Shaqooyinka 149 in la abuuro 2013 ilaa dhamaadka Expo ee 2021 oo ku salaysan daraasad.
Shaqooyinkaas waxaa lagu abuuray dhammaan qaybaha dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin Dalxiiska, Retail, Maaliyadda, Real Estate, Dhismaha, Aviation, Martigelinta, Teknolojiyada, Warbaahinta & Isgaarsiinta, Gaadiidka, Ammaanka, Ganacsiga iyo Maalgashiga iyo qaar kaloo badan. Qaybta 'Career' ee qaybta rasmiga ah ee 'Expo2020 Dubai', waxaa jira fursado lagu soo gudbiyo CV-da oo dalbado fursado badan oo la heli karo. Fursadaha shaqada ayaa la heli doonaa kahor-bandhig, inta lagu jiro Expo iyo xilliga dib u dhiska.
Eeg dhammaan furitaanka shaqooyinka leh Expo 2020
Horeba, kumanaan qof ayaa loo shaqeeyay gaar ahaan dhismaha, tiknoolajiyada iyo gaadiidka maxaa yeelay waxa ay weli ka socdaan goobta Expo2020 iyo meelaha kale ee ku habboon diyaarinta bisha 2020. Qaar ka mid ah shaqooyinka ajaanibta ah ayaa sidoo kale loo abuuray iyada oo loo marayo ka qaybgalka dalal kala duwan. Job seekers waxay ka faa'iideysan karaan fursaddan si ay qayb uga noqdaan waayo-aragnimada taariikhda taariikheed.
Kobcinta qaybta dalxiiska
Dalxiisku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah kobaca dhaqaalaha dhaqaalaha UAE. Sida laga soo xigtay Dubai Waaxda Dalxiiska & Suuq-Ganacsi Ganacsi, Dubai ayaa diiwaangashatay laba boqolkiiba kordhay booqashooyinka dalxiiska marka loo eego isla muddadaa sannadkii hore. Marka la gaaro dhammaadka rubuc-kowaad ee 2019, Dubai waxay soo dhaweysay 4.75 million oo caalami ah oo caalami ah.
Dubai ayaa si muuqata ugu muuqata khariidadda dalxiiska aduunka sida quruxda badan sida Burj Khalifa, Palm iyo Burj Al Arab. Horeba, UAE waxay si rasmi ah u hirgelisay afar goobood oo ah UNESCO Meelaha Dhaxalka ah, iyada oo siddeed kale oo ah goobaha Dhaqameelka Dhaqanka.
Dubai oo martigelinaysa World Expo 2020 ayaa ah inay sii wanaajiso dalxiisayaasha dalxiisayaasha ah ee dalka ka hor, inta lagu guda jiro iyo ka dib. Qiyaasta 25 million qof ayaa la filayaa inay booqdaan Expo 2020 oo ku yaala Dubai inta u dhaxaysa 20th Oktoobar 2020 iyo 10th Abriil 2021.
Shirkadda Dubai ee Ganacsiga Dalxiiska iyo Ganacsiga Ganacsiga (DCTCM) ayaa marwalba gacanta ku haya hay'adaha dawlada ee socdaalka si ay u fududeeyaan dalxiisayaasha soo galaya Dubai si ay si fudud u helaan fiisooyinka. Dubai waa xarunta ugu weyn ee duullimaadka ee gobolka iyo barta nadiifka ah ee loogu talagalay dadka safarka ah si ay u socdaan meel kasta oo caalami ah.
Iyadoo World Expo 2020, Dubai ayaa noqotay mid aad u soo jiidasho leh oo ah dalxiis dalxiis, taasina waxay horseedi doontaa isbedelka GDP-ga dhaqaalaha dalka.
Fursadaha Maalgashiga ee Kordhay
Kalsooni maalgashadayaasha ayaa kordhay marka dhaqaaluhu uu ku soo hagaagayo oo uu sii waarayo. Shirkadda Expo 2020 Dubai ee mustaqbalka fog ee dalka ayaa dhaqaalaheeda horumarin doonta bilyan doolar (USD 122.6) iyo taageerada 33.4 ee sanadaha u dhexeeya 905,200 iyo 2013.
Dubai ayaa lagu wadaa in ay aragto kororka maalgashiga caalamiga ah sababtoo ah xuquuqdeeda ah inay marti galiso Expo2020. Maal-gashiga ayaa noqda mid soo jiidasho leh waddan markii ay sumcad u leedahay inay noqoto mid amaan ah, soo dhaweyneysa, faa'iido leh. UAE waa wax walba oo badanaa oo si fudud u istaagi kara Gacanka iyo Bariga Dhexe. Maalgashiyada waxay u furan yihiin meelaha ganacsiga, ganacsiga, ganacsiga & horumarinta, maaliyadda, madadaalada, dalxiiska, dhismaha, martigelinta, duulimaadka iyo waxyaabo kaloo badan.
Horeyba shirkado dhowr ah ayaa dib u dejiyey ama waxay fureen laamaha iyo boostada Dubai. Dhismuhu wuxuu soconayaa inta badan mashaariicdaas. Ururada caalamiga ah iyo kuwa caalamiga ah waxay isku mideeysan yihiin shirkada Expo oo ay la wadaagaan shariikyadeeda rasmiga ah kuwaas oo ku faraxsan inay soo bandhigaan ururadooda suuqgeynta suuqgeynta iyo alaabooyinka. Maalgashadayaasha gudaha iyo kuwa shisheeye labadaba waxay ku kalsoon yihiin in aduunka World Expo 2020 lagu qabto magaalada Dubai, dhaqaalaha UAE dhaqaaluhu waa mid deggan, maalgashaduna waa ammaan waxayna dib u soo celinayaan lacagta.
Kordhinta iyo kor u qaadida ganacsiga maxalliga ah
Dubai waxay hoy u tahay ganacsiyo dhowr ah, oo leh milkiilayaal ah muwaadiniinta UAE, dadka ajnabiga ah iyo maalgashatada shisheeye. Waxaa jira fikrado badan oo maxaliga ah oo guryaha ku yaala kuwaas oo ka faa'iideysan doona marti gelinta Dubai ee marti gelinta Expo 2020. Ganacsiga maxalliga ah ayaa ah laf-dhabarka koritaanka dhaqal kasta, iyo dawlado badan ayaa maal-galiya hannaanka iyo barnaamijyada hormarinta abuurka si loogu dhiirrigeliyo ganacsiyada iyo koritaanka shirkadaha maxalliga ah. Ganacsiga guryaha, labada shirkadood ee waawayn iyo SME ayaa la filayaa inay arkaan kor u kaca isticmaalka iyo maalgashiga qaybaha kala duwan ee Real Estate, Warbaahinta, Safarka iyo Dalxiiska, Waqtiga, Dhaqaalaha iyo guud ahaan warshadaha dhaqaalaha.
Waxaa jira fursado ganacsi oo dhowr ah oo ku soo baxay dhammaan qaybahaas kuwaas oo diyaar u ah xitaa suuqyada cusub iyo kuwa cusub. Meelo badan oo qandaraaslayaasha maxaliga ah ayaa lagu baadhi karaa iyada oo loo marayo geeddi socodka dalabka iyo hindise-bixinta ee laga heli karo fursadaha soo iibsiga. Expo2020 wuxuu leeyahay suuq-geyn rasmi ah oo caalami ah oo bilaash ah oo la adeegsan karo fursado ganacsi oo loo heli karo diiwaangelin iyo khaasatan faa'iido u lahaanshaha SME. Tani waa hab wax ku ool ah ganacsiga maxalliga ah ee ujeedkiisu yahay abuuritaanka xuduudaha cusub wuxuu muujin karaa dunidii waxa ay tahay inay bixiyaan.
Expo2020 waxay aragtay horumar weyn oo kaabayaasha ah ee Dubai iyo UAE. Gaadiidka oo keenaya goobta Expo sida waddooyinka, khadadka metro iyo buundooyinka ayaa la fidiyay lana hagaajiyay. Waxaa jira mashaariic badan oo ka socda dhismaha hoteelada, degaannada, daryeelka caafimaadka, iyo xarumaha kale ee ganacsiga.
Macluumaadka la heli karo waxay soo jeedinayaan in qaybaha ugu badan ee goobta goobta dib loo isticmaali karo, iyo hirgalintaan joogtaynta ah waxaa loo yaqaano 2020 Degmada kadib markii loo yaqaan Expo. Bixinta kaabayaasha iyo nadaafada loogu talagalay Expo waxa ay ku xiran tahay mawduucdeeda ah Sustainability, Mobility and Opportunity. Mashruucan wuxuu sidoo kale ku dhow yahay Madaarka Caalamiga ah ee Al Maktoum, Dubai World Central (DWC) oo ku yaal Jebel Ali, taasina waxay fududeyn doontaa gaadiidka martida iyo maalgashadayaasha.
Kaabayaashu wali waa la isticmaali doonaa ka hor, inta lagu jiro iyo ka dib marka laga hadlayo Expo; iyo kor u qaadida ganacsiyada iyo dhaqaalaha guud ahaan.
5 hababka Expo2020 ayaa kor u qaadi doona dhaqaalaha Dubai,
Macluumaadka saxda ah ayaa horeyba u soo baxay kala duwanaansho 1day, 3-maalmood, baasaboorka bilaha iyo xilliyada. Waxaa jiri lahaa dhalinyaro iyo qiimo dhimis arday; iyo helitaanka bilaashka ah ee go'aanka, dadka waaweyn ee 65 iyo kor, iyo caruurta ilaa sanado 5.
World Expo 2020 ayaa Dubai siiyay saxaafad sax ah iyo sumcad iyada oo ubaahan in ay dhiirigeliso kalsoonida caalamka ee labada dhinac ee maxalliga ah iyo kuwa shisheeye. Waxa kale oo ay kor u qaadday dareenka farxad ee muwaadiniinta Imaatinka iyo dadka degan isla markaana waxay ka tagi doonaan dhaxalka dheer ee loo baahan yahay ee kobaca dhaqanka iyo dhaqaalaha.
La xiriir Theresa R. Fianko on Linkedin